ဘယ်လိုနေထိုင် ဂရုစိုက်မှုတွေက သင့်အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းကို ကုသ ကာကွယ်နိုင်မလဲ? – YANGON STYLE
ဘယ်လိုနေထိုင် ဂရုစိုက်မှုတွေက သင့်အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းကို ကုသ ကာကွယ်နိုင်မလဲ?
အာလုံးအပဲ မင်္ဂလာပါရှင်။ အရင်တစ်ပတ်က အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာ အားလုံးပဲမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဘယ်လိုနေထိုင် ဂရုစိုက်မှုတွေက သင့်အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းကို ကုသ ကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးခြင်ပါတယ်။
ရေဓာတ် အစိုဓာတ် ပါဝင်မှုများပြားသော Hydrating Essence, Moisturizer, Lotion တို့ကို မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း ရေချိုးပြီးတိုင်း လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။
မျက်နှာသစ်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းတို့ကို ရိုးရိုးရေ (သို့မဟုတ်)ရေနွေး ကိုပဲအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်၍သော်လည်းကောင်း ရာသီဥတုအနေအထားအရသော်လည်းကောင်း တစ်နေ့တစ်ကြိမ်လောက်ပဲ ချိုးသင့်ပါတယ်။
ရေကူးပြီးတဲ့ အခါမျိုးမှာ သေချာလေး ရေပြန်ချိုးပေးဖို့နဲ့ အစိုဓါတ်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းဖို့ အဆီတစ်မျိုးမျိုးကို လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်း အစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ Lip scrub , Lip bam စတဲ့ အစိုဓါတ်ကို ထိန်သိမ်းပေးနိုင်တဲ့ အဆီတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။
မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့ ဆပ်ပြာများကို Chemical ပါဝင်မှုနည်းပါသော အပျော့စား ကိုသာအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Deep cleansing ဖြစ်တဲ့ Scrubလုပ်ခြင်းကို ပုံမှန်အသားအရေဆို တစ်ပတ်မှာ အများဆုံး (၃)ကြိမ်၊ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေဆို အများဆုံး (၅)ကြိမ် နှင့် ခြောက်သွေ့သော အသားအရေဆိုရင်တော့ တစ်ပတ်မှာ (၁)ကြိမ်ပဲ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ Scrubလုပ်ပြီးတိုင်းလဲ moisturizer တစ်ခုခုကို ပြန်လိမ်ပေးသင့်ပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်း ကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ လိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်များကိုလည်း သေချာလေးဖျက်ပေး ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နေရောင်နဲ့ ထိတွေ့ရမယ့် အချိန်မျိုးတွေမှာ တော့ Hydrating Lotion တွေနဲ့တင်မလုံလောက်ပဲ Sun block ပါလိမ်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အတွက် တစ်နေ့ကို ရေ(၈)ခွက် ပုံမှန်သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ Antioxidant , Vitamin-E,C,A ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက် သစ်သီဝလံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စားသုံးပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်း ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ဘယ်လို ကာကွယ်နေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။